Izay matoky tena no azo itokisana | NewsMada
Izay matoky tena no azo itokisana
Mafimafy sy sarotsarotra ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus amin’izao. Misy, ohatra, ny namoy ny ainy; mitombo isa saika mila ho isan’andro ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny otrikaretina. Hanao ahoana? Sanatria, tafita vao ho rendrika. Efa misy, ohatra, ny fanefitra sy fitsaboana ny valanaretina. Tsy nanaraka izay fisorohana sy fitsaboana izay ireo namoy ny ainy?
Tsy vitan’izany, talohaloha teo: be lavitra no ho ny mbola manaraka fitsaboana ny isan’ireo marary sitrana. Tato ho ato, mifamadika izany: maro no ho ny efa sitrana ny marary. Nahoana? Averimberina mandrakariva ny amin’ny tokony hanajana amin’ny antsipiriany sy manontolo ny fepetra fiarovan-tena sy fitsinjovana ny hafa koa ara-pahasalamana. Fahavalo iombonana tsinona no iadiana amin’izao.
Amin’izany, mbola misy ihany no tsy mino ny fisian’io valanaretina io? Eo koa ireo tsy miraharaha fotsiny izao, manao kinanga izany ho ambanin-javatra na ambin-javatra. Nefa izay tsy fitandremana kely ataon’ny vitsy izay no mety hitera-doza lehibe ho an’ny maro. Tsy inona fa fahatokitokisan-tena diso toerana. Miandry inona, sanatria, vao tena hahatsiaro tena amin’izao loza efa mihatra izao?
Ilaina ny matoky tena amin’izay mitranga sy atao amin’izao ady izao. Saingy miara-dalana amin’izany ny fahalalana ny fahavalo atrehina, ny fananana fitaovana amin’izany, ny fisian’ny paikady mazava… Ady mihatra amin’ny ain’ny tena sy ny aim-pirenena no atrehina izao, ka mila fahamatorana sy fitandremana. Fahatokisan-tena tanteraka izany, fa izay matoky tena no azo itokisana. Nahoana?
Misy ny fanefitra sy ny fitsaboana, mila matoky tena amin’izany ny tsirairay sy ny rehetra. Na izany aza, takina sy tsy maintsy atrehina koa ny fitandremam-pahasalamana. Tsy ny fisian’ny fanefitra sy ny fitsaboana izao na izatsy akory no ndeha hanaovana mosalahy amin’ny karazana aretina amin’izany. Ny miala lavitra ny loza raha mbola azo atao no fahendrena, fa tsy ny manatona na mihantsy azy.